Laga yaabaa 19, 2018 admin
Coincheck doonaya ogolaansho ka xakameeya Japanese & qorshaynaysa ballaarinta US
In ka yar afar bilood ka dib markii loo arag ah $500 million of cryptocurrency in haakarisku, sarrifka cryptocurrency Japanese Coincheck ayaa qorsheynaya in ay soo laabasho.
Under hoggaanka cusub ka dib markii sale dab loogu dilaalista Monex Inc. a, Coincheck ayaa si xoogan loola faqri si loo hagaajiyo amniga iyo ka mid ah macaamiisha ka baxeen ugu yaraan soo celiyo kalsoonida $540 million ee Duke of hack. Wareysi, Sarkaalka Fulinta Monex Oki Matsumoto sheegay in uu rajaynayo is-dhaafsiga si loo sugo ruqsad rasmi ah ee Japan bisha soo socota. Waxa uu sidoo kale qorsheyneysa in ay keenaan madal Coincheck ee America.
Matsumoto ayaa sheegay "Waxaan weynayn karo saldhig macaamiisha Coincheck our.”
Seeraar & Crypto Price Pre...